Nemanja Matic Oo Daboolka Ka Qaaday Dhibaatada Haysata Martial Iyo Sida Uu Ku Noqon Karo Xiddig Weyn – Cadalool.com
Nemanja Matic Oo Daboolka Ka Qaaday Dhibaatada Haysata Martial Iyo Sida Uu Ku Noqon Karo Xiddig Weyn
Anthony Martial waxa uu ka mid noqon doonaa ciyaartooyada ugu wanaagsan ee horyaalka Premier League haddii uu fahmo xirfaddiisa, sida uu aaminsan yahay laacibka ay isku kooxda yihiin ee Nemanja Matic.
Martial oo ay da’diisu tahay 22 jir, ayaa saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Premier League waxa uu Manchester United u dhaliyey afar gool oo midkii ugu dambeeyey uu daba mariyey goolhayaha Everton ee Jordan Pickford oo 2-1 ay kaga adkaadeen.
Dad badan ayaa saluug ka muujiyey qaab ciyaareedka Martial ee horraantii xili ciyaareedkan, hase yeeshee waxa uu kasbaday in safka koowaad laga dhigo saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey oo ay ku jirtay kulankii Juventus ee guul-darrada iyo guushii xigtay ee Everton.
Haddaba, laacibka khadka dhexe ee reer Serbia ee Nemanja Matic ayaa waxa uu sheegay in Martial uu leeyahay tayo iyo hibo ciyaareed oo dabiici ah, balse ay jiraan waxyaabo ay tahay inuu fahmo marka uu garoonka gudihiisa ku jiro.
“Martial waa ciyaartoy wanaagsan, waxaanay tahay inuu taas fahmo. Waxa uu u baahan yahay kalsooni. Weli wuu yar yahay waxaanu sii wadi karaa dhalinta goolasha. Haddii uu heerkiisa ugu sarreeya gaadho, waxa uu ka mid noqon doonaa ciyaartooyada ugu wanaagsan horyaalka, waanan hubaa.” Sidaas waxa yidhi Nemanja Matic.
“Mararka qaarkood waxay ila tahay in aanu fahamsananyn sida uu u fiican yahay. Wuu dheereeyaa, ku wanaagsan yahay kubbadda marka uu hayo, waanu la ordi karaa. Waxa uu eeyahay wax kasta oo looga baahdo ciyaartoy Manchester United ah.” Ayuu mar kale yidhi Nemanja Matic.
Laacibka reer Serbia waxa uu tibaaxay in tababare Jose Mourinho uu u sheegay Martial inuu yahay ciyaartoy wanaagsan oo muhiim ah, isaguna shaqsiyan (Matic) uu hal mar kala hadlay arrintaas.